ပင်မစာမျက်နှာ အာဖရိကဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Pierre-Emerick Aubameyang ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများသူတစ်ဦးဘောလုံးပါရမီ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; ''Auba'' ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Aubameyang ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ရက်စွဲကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ကိုမှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏အကောင့်တတ်၏။ analysis ကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကိုအများအပြား OFF နှင့် on-အသံနည်းနည်းလူသိများအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။ Begin ပေးနိုင်ပါတယ်။
Pierre-Emerick Aubameyang ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -အစောပိုင်းကလေးဘဝဘဝ
Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang သည်သူ၏ Gabonese ဖခင်မစ္စတာ Pierre ၏François Aubameyang "Yaya" ဟောင်းတစ်ဦး Gabonese ဘောလုံးနောက်ခံလူနှင့်စပိန်မိခင်မစ္စမာဂရီး Crespo Aubameyang တစ် Boutique ပိုင်ရှင် / စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကဇွန်လ 18 ၏ 1989th အပေါ် Laval, ပြင်သစ်မွေးဖွားခဲ့သည် အမျိုးသမီးတစ်ဦး။
Aubameyang နှစ်ဦးစလုံးပြင်သစ်နှင့် Gabonese နိုင်ငံသားအဖြစ်မျှဝေသူတစ်ဦးတစ်ဝက်သွန်းဖြစ်ပါတယ်။ သံသယမပါဘဲ, သူ့ရောနှောပြိုင်ပွဲအလားအလာသည်သူ၏သံလွင်အသားအရေအတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်သည်။ သင်သည်လည်းတက်ကြီးထွားလာနေချိန်တွင်သူကပြင်သစ်နှင့်ဂါဘွန်ရှိသူ၏ကလေးဘဝအသက်တာကုန်ဆုံးခဲ့ပေ။ သူကသူ့အဖေအေစီမီလန်များအတွက်ကင်းထောက်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘယ်မှာမီလန်, အီတလီမှာကြီးပြင်းခဲ့သည်။
Pierre-Emerick Aubameyang အကယ်စင်စစ်ကုံထံများ၏ကလေးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကတစ်ဦးတငျပွကလေးဘဝအတွေ့အကြုံ, သူ့အသက်အရွယ်နဲ့များစွာသောအဘို့အလှနျအရာတစျခုရရှိခဲ့သညျ။ ကမ်ဘာပျေါမှာအကြီးမားဆုံးကလပ်များထဲမှတစ်ဦးဘောလုံးကင်းထောက်ဖြစ်ဖြစ်ပျက်တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သူဘောလုံးသမားဖခင်ရှိခြင်းဧကန်အမှန် Auba များအတွက်အားသာချက်ဆိုလိုသညျ။
Pierre-Emerick Aubameyang ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -မိသားစုဘဝ
သူ၏အဖေ (အောက်တွင်ပုံ) Auba ရဲ့ဘောလုံးစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်အကဲဖြတ်များအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်ခဲ့သည်။ အကြီးတန်း AC အ Millan ကင်းထောက်နှင့်ဧကန်အမှန်အကသူ၏န်ထမ်းနဲ့သူ့ရဲ့3သားပြုပြင်တာတွေဘောလုံးကွင်းထဲမှာနက်ရှိုင်းသောဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုလူအဖြစ်တစ်ခက်ခဲအရာမဟုတ်ခဲ့ပေ။
Pierre-Emerick Aubameyang နှင့်မိဘများရတာဟာမိသားစုဘဝ
ဒါဟာအစ "Yaya" အဖြစ်လူသိများမစ္စတာ Pierre ၏François Aubameyang 1982 မှ 2002 ကနေသရုပ်ဆောင်တော်မူသောအချိန်ကာလအတွင်းအာဖရိကရဲ့အကောင်းဆုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်၏တစျခုဖွစျသညျကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းထိုက်သည်။ သူနိုင်ငံများအသင်း၏အ 1994 နှင့် 1996 အာဖရိကဖလားအတွက် Gabonese အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့နျဆာပခဲ့သည်နှင့်ပြင်သစ်တွင်ထိပ်တန်းအသင်းများကိုတစ်အရေအတွက်ကစားခဲ့ပါတယ်။ သူ့အိပ်မက်အမြဲတမ်း Aubameyang အမွေကိုဆက်လက်မည်သူ၏သားတို့အပြုစုပျိုးထောင်ဖြစ်ခြင်းသိရသည်။
ဖခင်ကဲ့သို့သား - Aubameyangs Aubameyang ၏အမေမာဂရီးတာ
သူ၏ မိခင်, မစ္စမာဂရီး Crespo Aubameyang အခြားတစ်ဖက်တွင်အစဉ်အမြဲသူ့သားသမိုင်းသူ့ဘက်မှာကပ်ရှိသည်ဖို့သူမခင်ပွန်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်စပိန်မူရင်းပြင်သစ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
၎င်း၏စပိန်တို့၏အသွေးကိုလည်း Auba ရဲ့သွေးပြန်ကြောမှတဆင့် gushes သတိပြုပါရန်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အယ်လ် Barraco (အနောက်မက်ဒရစ်၏တည်ရှိသည်) ၏မယ်တော်ရဲ့မြို့နှစ်ပေါင်းများစွာမှတ်ချက်အတော်ကြာဘောလုံးသမားများထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
Pierre-Emerick Aubameyang ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -သူဟာမိသားစုက Man ဖြစ်ပါသည်
ကွာဘောလုံး, 'Auba' 'ကနေသူအားမိမိ Spiderman နှင့် Batman အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပသန့်ရှင်းတော်မူသော Curtis, သူ့ရည်းစား Alysha နဲ့သားအတူအချိန်ဖြုန်းဖို့ချစ်သောသူတစ်ဦးပြည့်စုံမိသားစုသည်လူအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြသည်လျက်ရှိသည်။
Auba အဆိုအရ "မေတ္တာဖြစ်ကောင်း, မေတ္တာအရှိဆုံးထူးခြားတဲ့နှင့်မကြာခဏလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မူကွဲ Alysha နှင့် Curtis ၏ခံစားမှုဖြစ်ပါသည်, အားလုံး၎င်း၏ပုံစံများကိုတစ်ဦးလှပသောအရာဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်"
"သူသည်ငါ့ကိုအမှန်တကယ်တိုးတက်မှုပေးထားရဲ့" အဘယ်သူ၏ဖိနပ်အများဆုံးကာလ "Curtis" သူ့သားရဲ့နာမညျကိုကိုဘွားမာနထောင်လွှားဖေကပြောသည်။
သူ၏စကား၌, "အိမ်မှာတစ်ခုတည်းသောစူပါဟီးရိုးငါ၏သား Curtis ဖြစ်ပြီးကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးအခြိနျမှနျမှတီဗီမှာ Batman နှင့် Spiderman watch"
Pierre-Emerick Aubameyang ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -တစ်ဦးကဘောလုံးညီအစျကို
သူဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားများဖြစ်ကြသူနှစ်ဦးအဟောင်းတွေကညီအစ်ကိုတွေရှိပါတယ်။ တကယ်တော့, သုံးခုစလုံးအေစီမီလန်မှာ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။
သင် Aubameyang ညီအစ်ကိုများအကြောင်းကိုမသိသောအဘယျသို့
Pierre-Emerick ထွန်းကားခဲ့ကြစဉ်တွင်, တခြားသူတွေနေတုန်းပဲကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုရဖို့ရုန်းကန်။ သူ့အစ်ကိုအ Catilina ကိုလည်းဝီလီဂျာမန်အောက်ပိုင်းလိဂ်များတွင်ကစားလွန်းနေပေမယ့်လက်ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစဉ်အခါ, Mid-2000s ၌ထင်ရှား၏လက်တဆုပ်စာဖန်ဆင်းတော်မူသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတစ်ဂါဘွန်ဖြစ်ပါသည်။
Pierre-Emerick Aubameyang ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -အဆိုပါ Daddy ရဲ့ Boy
မိမိညီအစ်ကိုတို့နှင့်မတူဘဲ Auba ကသူ့အဖေရဲ့အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ သူကသူ့ကိုလေးစားပေမယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်မိသားစုကိစ္စရပ်များအပေါ်သူ၏အကြံပေးချက်ကိုအောက်ပါအတိုင်းသာ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ကလပ်၏အပြောင်းအရွှေ့ညှိနှိုင်းမှုနှင့်ရှေးခယျြမှုနှငျ့ပတျသကျသောဘောလုံးဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်သူ၏စူပါဖေဘို့ဖြစ်ကြ၏။ ကိုယျတျောသ, ဒါဝေးကိုဖန်ဆင်းဆုံးဖြတ်ချက်များအောင်မြင်သောထင်ရှားပြကြပြီ။ ဥပမာ, စိန့် Etienne နယူးကာဆယ်မှ Auba ရောင်းဖို့လိုချင်နေတဲ့အချိန်ရှိ၏။ သူ၏အဖေညျငွငျးနဲ့သူ့သားဒေါ့မွန်လွှဲပြောင်းရန်သဘောတူဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Auba အဆိုအရ, "ငါ့အဖေ Jurgen Klopp ရဲ့ဒေါ့မွန်ဂိမ်းကိုလေ့လာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ကပိုက်ဆံနိမ့်ခဲ့သော်လည်းချန်ပီယံလိဂ်အတွက်ဗိုလ်လုပွဲဖြစ်လာခဲ့သည်။ "
Pierre-Emerick Aubameyang ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -အဆိုပါမြန်နှုန်းပြီးပြည့်စုံသော
အရှိန်အဟုန်ကိုသင် Pierre-Emerick Aubameyang နှင့်အတူပေါင်းသင်းမယ်လို့သိသာအရာဖြစ်၏။ ၎င်း၏သည်သူ၏အကြီးမြတ်ဆုံးတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ။ သူကတာရှည်တိုတို-and ပြီးတော့ Activision နေတာအတွက်အတော်လေးအမြန်ဖွင့်ခြင်းနှင့်လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာကောင်းစွာဘောလုံးကိုသယ်နိုင်ပါတယ်။ သူ 30 စက္ကန့်အတွင်း 3.7 မီတာမှာအသုံးခံသွားပါတယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကမ္ဘာ့အိုလံပစ် 100 မီတာချန်ပီယံများနှင့်ကမ္ဘာ့စံချိန် holder- Usain Bolt ကထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာဖြစ်ဟုဆိုသည်ခဲ့သည်။
ပေမယ့်သူကဂျာမန် Sprinter ဂျူလီယန် Reus အားဖြင့်တစ်ဦး 100 မီတာအပြေးပြိုင်ပွဲမှစိန်ခေါ်ထားပြီးပေမယ့်သေးစိန်ခေါ်မှုလက်ခံခဲ့သည်မထားပါဘူး။
Pierre-Emerick Aubameyang ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေး
2007 ခုနှစ်တွင်သူသည်သို့ရေးဆွဲခဲ့သည် အေစီမီလန် မိမိအဖေအားဖြင့်အကယ်ဒမီ, အီတလီဘီလူးကြီးဥရောပချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့သည်နှစ်တွင်။ သူအမှန်တကယ် Rossoneri များအတွက်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ပထမအသင်းကစားသမားအဖြစ်သူ့ကိုယ်သူထူထောင်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအစားသူကထိုကဲ့သို့သော Dijon, လိုင်လီနှင့်မိုနာကိုအဖြစ်ပြင်သစ်ကလပ်မှချေးငွေအပေါ်အထဲကရေးဆွဲခဲ့သည်။ 2011 ခုနှစ်တွင်သူ 31 ဂိုးသွင်းနှင့် 1 များအတွက်ယခုနှစ်လီဂူး 2012 အာဖရိကကစားသမားအမည်ရှိဘယ်မှာစိန့် Etienne ကအမြဲတမ်းစာချုပ်အပေါ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သူက Saint-Etienne နည်းပြ Christophe Galtier နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း-ပြောင်းလဲနေတဲ့တှေ့ဆုံခဲ့သညျ။ ပြင်သစ်နည်းပြအဆိုအရ,
"အရာအားလုံးပထမဦးဆုံးမှာ Auba အဘို့အချောချောမွေ့မွေ့သွား၏သော်လည်းမရ။ ငါသာသူ့ကိုအတွက်တဦးတည်းအရာကိုမြင်တော်မူ၏။ သူ၏အမြန်နှုန်းပါပဲ။ ငါသူအစဉ်အမြဲငါဆည်းပူးင်အမြန်ဆုံးဘောလုံးသမားခဲ့ကြောင်းလေ့ကျင့်ရေးနေစဉ်အတွင်းကိုမြင်တော်မူ၏။ "
20 ၏အသက်အရွယ်မှာ Pierre ၏အစောပိုင်းအီတလီ U-21 ခြမ်းကိုခေါ်ခံရပြီးနောက်ပြင်သစ် U-19 အသင်းများအတွက်ကစားခဲ့ပါတယ်။ သူ 2013 အတွက်ဂျာမဏီရဲ့ Borussia Dortmond သို့ပြောင်းရွှေ့ပြီးအစီရင်ခံ€ 13 သန်းသဘောတူညီချက်အတွက် BVB ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးယင်း Bundesliga.He အတွက်ထိပ်တန်းတိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
Pierre ၏ပြင်သစ်တှငျမှေးဖှားနှင့်သူ၏အစ်ကိုဖြစ်သူ Catalina ပြုသမျှသော Aubameyang ဘောလုံးနွယ်ကိုဆက်လက်ရန်လေလံအတွက်ကပ္ပတိန်အဖြစ်ဂါဘွန်အဘို့ကစားခဲ့သည်ပေမယ့်။ သူကသူ့ကလေးတွေသူတို့ကိုအတုယူဖို့ရှာအံ့သောငှါ သိ. နှစ်သက်သောနှင့်ဂုဏ်ပြုသည်။
Pierre-Emerick Aubameyang ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -သမိုင်း Making
Aubameyang သည့်ဘွန်ဒစ်လီဂါသို့မဟုတ်အခြားဂျာမန်လိဂ်များတွင်ကစားရန်ပထမဦးဆုံး Gabonese ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ သူထိုနှစ်ဇူလိုင်လအတွက်ဒေါ့မွန်ပူးပေါင်းပြီးနောက်သြဂုတ်လ 10, 2013 အပေါ်သူ၏ပွဲဦးထွက်စေတော်မူ၏။ သူ FC အသင်း Augsburg ဆန့်ကျင်ကစားခဲ့သည့်သူ၏ပထမဦးဆုံးဂိမ်းထဲမှာတစ်ဦးဦးထုပ်လှည့်ကွက်သွင်းယူခြင်းဖြင့်အိပ်မက်ပွဲဦးထွက်ခဲ့ရသည်။
ထို့ပြင်သမိုင်းစာအုပ်တွေထဲမှာဇူလိုင်လ 2012 ခုနှစ်, Aubameyang အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲမှာဂါဘွန်ကိုယ်စားပြုလန်ဒန်သို့သွားကြ၏။ ဆွစ်ဇာလန်ဆန့်ကျင်ပထမဦးဆုံးပွဲစဉ်များတွင်သူဂါဘွန်ယှဉ်ပြိုင်ထဲမှာဂိုးသွင်းမယ်လို့တစ်ခုတည်းသောရည်မှန်းချက်ဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်မယ်လို့ထားတဲ့ဂိမ်း၏တစ်ခုတည်းသောရည်မှန်းချက်, သွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ ဤသည်ဂါဘွန်ရဲ့ပထမဦးဆုံးနှင့်သာအစဉ်အဆက်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုအိုလံပစ်မှာသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ 19 ဂိုးသွင်းပြီးမှ, Pierre-Emerick Aubameyang အားလုံးအချိန်ဂါဘွန်ရဲ့အမြင့်မားဆုံးရည်မှန်းချက်ကိုဂိုးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။
Pierre-Emerick Aubameyang ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -ကားများ
classy ကားများအဘို့ Aubameyang ရဲ့မေတ္တာကို
"ဒါဟာ, ဤကဲ့သို့သောကားများရှိခြင်းပျော်စရာရဲ့" သူသည်မိမိအ Lamborghini Aventador ခေထြား၏ကပြောပါတယ်။ အခုသူနေတဲ့ Lamborghini ကမောင်းပေမယ့် Aubameyang ရဲ့ကစားသမားအရေအတွက်ကိုပင်, သူ့ကားများ၏တာယာတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
Pierre-Emerick Aubameyang ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -အံ့သြစရာဖိနပ်
သူကမကြာခဏမစ္စတာအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေဟုခေါ်သည်။ Aubameyang ကဖိနပ်မှကြွလာအထူးသဖြင့်သောအခါ, စိတ်ကူးစိတ်သန်းမဆိုလမ်းပိုင်းအားဖြင့်သင့်ပျမ်းမျှအားကစားသမားမဟုတ်ပါဘူး။
Pierre-Emerick Aubameyang classy ဘွတ်ဖိနပ်
ဒီဇင်ဘာလ 2012 မှာတော့သူ 4,000 Swarovski crystals နှင့် Olympique Lyonnais ဆန့်ကျင်နေတဲ့ပွဲစဉ်တက်သည်နွေးနေစဉ်သူ၏နာမအရေအတွက်နှင့်သူ၏ကလပ်မောက်နှင့်အရောင်များကိုထည့်သွင်းမယ့်ဒီဇိုင်းကိုကျော်နှင့်အတူ encrusted ဘွတ်ဖိနပ်ဝတ်ဆင်။
Pierre-Emerick Aubameyang ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -သူဟာ Spiderman ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်
ကနေ့ပှဲ superhero မှကြွလာသောအခါ Aubameyang ယခင်အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်။ Spiderman ရန်ဤကိုးကွယ်မကြာခဏသည်သူ၏သူရဲကောင်းကစားဘောလုံးစောင့်ကြည့်ဖို့တစ်ခွင်မှာထိုင်သူကိုသူ့သား Curtis အားဖြင့်မှုတ်သွင်းခံခဲ့ရသည်။ Aubameyang တစ်ချိန်ကဘိုင်ယန်ဆန့်ကျင် 2014 Supercup အတွက်ဒေါ့မွန်များအတွက်သွင်းယူပြီးနောက်မိမိသားအဘို့စူပါဟီးရိုးအခမ်းအနားသရုပ်ပြခဲ့သည်။
Pierre-Emerick Aubameyang Spiderman ပွဲနေ့များ
မိမိသားကိုကာတွန်းစာအုပ်သူရဲကောင်းများ၏ကြီးမားသောပန်ကာဖြစ်ပါတယ်ရုံသည်မိမိအဘများကဲ့သို့ Spiderman မျက်နှာဖုံးထဲမှာပေါ်လာဖို့ချစ်တော်မူ၏။
Auba ရဲ့ Spiderman ပန်းတိုင်ပွဲနေ့များ
Pierre-Emerick Aubameyang ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -သူဟာ Batman ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်
သူသည်မိမိအ Spiderman paraphernalia မတှေ့နိုငျသောအခါသူ Batman မှပြန်သွားလေ၏။
Auba ရဲ့ Batman ပွဲ
Auba Batman တစ်ကျိကျိတက်ပန်ကာဖြစ်ပါတယ်။ သူကအမြဲမိမိသားအဘို့ Batman ဝတ်စုံဝတ်ထားတိုင်းရုပ်ပြစည်းဝေးကြီးမှာရှိ၏။ ဤသည်ကသူ၏နှင့်အတူထိတ်လန့်အများအပြားစောင့်ရှောက် စှဲကပျစှဲလမျးမှု အဆိုပါ Dark Knight အတူ။
Pierre-Emerick Aubameyang ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -ပွဲကျင်းပစဉ်မျက်နှာဖုံးဝတ်ဆင်များအတွက်ဒဏ်ငွေ
Auba တစ်ချိန်ကပွဲကျင်းပစဉ်တစ် Nike က-ထောက်ပံ့မျက်နှာဖုံးပေါ်ချပြီးများအတွက်ဒဏ်ရိုက်ခံခဲ့ရသည်။
အဆိုပါဒဏ်ငွေ€ 50,000 န်းကျင်ဖြစ်ကောလဟာလသတင်းများအရခဲ့သည်။ ဒါဟာနောက်ပိုင်းတွင်မျက်နှာဖုံးသူဝတ်ထားခဲ့ Nike က Hypervenom Phantom "Strike ည" ဘွတ်ဖိနပ်ထံအပ်နှံခဲ့ကွောငျးကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ့မွန်အမှုဆောင်ချုပ်ပညာရှင် Hans-Joachim Watzke Kicker မဂ္ဂဇင်းသို့ပြောကြားခဲ့သည်: '' ဒါဟာ Nike ကဒီလမ်းအတွက်စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားတွန်းဖို့ကြိုးစားနေခဲ့မဖြစ်နိုင်ပါ။ ''
Pierre-Emerick Aubameyang ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -အာဖရိကကိုခစျြ
Auba ရဲ့အာဖရိက tatoo သူ့ခန္ဓာကိုယ် decorates နှင့်တိုက်ကြီးများအတွက်မေတ္တာနှင့်သူ၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့သူတစ်ဦးအာဖရိကမွေးဖွားခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်အာဖရိကကိုယ်တော်၌မွေးဖွားခဲ့သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဟုတ်သောကွောငျ့, အာဖရိကဖြစ်ပါတယ်။
Pierre-Emerick Aubameyang ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -သာဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုချစ်သောသူ
ပထမတစ်ချက်မှာ - ဟုတ်ကဲ့သူ Crystal ဖိနပ်, Spiderman မျက်နှာဖုံးများ, Batman Cape ကျီ။ သံသယမရှိဘဲ, Auba ဘောလုံးအနုပညာရှင်တစ်ဦးကိုအထူးကြင်နာဖြစ်ပါတယ်။
ပိုမိုနီးကပ်စွာစစ်ဆေးခြင်းတို့အပေါ်မှာ, သင်တိုက်ခိုက်သငျသညျသူကစားများ၏အစေးပြင်ပတွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဘယ်သူကိုမဟုတျကွောငျးကိုစောငျ့ရှောကျပါလိမ့်မယ်။ မိမိအရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေ Christophe အဆိုအရ Jallet,
"Aubameyang ညဉ့်အခါကလပ်သို့သွားရောက်မထားဘူးသူတစ်ဦးတိတ်ဆိတ်လူကလေးဖြစ်ပါသည်အရက်ကိုမသောက်ရပါဘူးအမြဲတမ်းဘောလုံးအကြောင်းကိုအိပ်မက်တွင်" ။
Pierre-Emerick Aubameyang ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -ဆံပင်ပုံစံ
Auba သည်သူ၏ဆံပင်ပုံစံတွေအကြောင်းကိုအလွန်စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကရှင်ပေါလု Pogba ရဲ့ပိုင်နက်ကိုထိပါးခဲ့ကြသူအနည်းဘောလုံးသမားတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင်သူ၏ဆံပင်ဂိမ်းတွေနဲ့မအစေး - on Pierre-Emerick Aubameyang အသိပေးစာပေါလု Pogba ကိုတင်ထားသည်။
Pierre-Emerick Aubameyang ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -Summersault မာစတာ
Miroslav Klose ယခု Aubameyang အဖြစ်ကောင်းစွာမတို့ကိုကျင့်လေ့ရှိတယ်။ ၎င်း၏သည်မိမိကျွမ်းပစ်။ Pierre-Emerick Aubameyang ပြောသည် အားကစား Bild သူသည်မိမိအကျွမ်းပစ်အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပကြသည်ကိုသတိထားပါဖြစ်ပါသည် "အန္တရာယ်မပြု" ဂါဘွန်ရဲ့ဘောလုံးအသင်းနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများအားဖြင့်ရပ်တန့်ရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်ခံရပြီးနောက်။
တကယ်တော့, Auba ချွတ်ယူစီရည်မှန်းချက်ဖြစ်စေမပြီးနောက်အလိုအလျောက်ဆုံးဖြတ်ပေမယ့်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောသပိတ်အပြီးမှာအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကြတယ်။
Pierre-Emerick Aubameyang ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -Crespo လေးစားမှု
သူတို့ရဲ့လက်နက်အတွက်အခြားဘောလုံးသမား၏နာမတော် crested ကြသူကမ်ဘာပျေါတှငျမဆိုဘောလုံးသမားခဲရှိပါသည်။ Auba ဒီတစ်ခုချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Crespo များအတွက် Auba ရဲ့ Tatoo
Aubameyang ရဲ့ငယ်ဘဝသူရဲကောင်း: Hernan Crespo
သူကသူ့ရုပ်တုကိုသယ်ဆောင်, သောအာဂျင်တီးနားရဲ့တိုက်စစ်မှူးဖြစ်ပါတယ် "Hernan Crespo" သူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ဖျံပေါ်မှာ. အစီရင်ခံစာများညွှန်ပြ ထို Hernan Crespo ကိုလည်းနာမကိုအမှီဖြင့်သမုတ်သောသူအသူ၏မိခင်မှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Aubameyang Hernan Crespo နှင့်ဂိမ်း၌သူ၏အကြီးမားဆုံးစံပြအဖြစ်အမည်များသူ့ကိုတစ် Self-ဝန်ခံပန်ကာဖြစ်ပါတယ်။
Auba အဆိုအရ "Crespo, ပြောင်းလဲနေသောလေထုထဲတွင်အားကောင်းတဲ့, နည်းပညာပိုင်း-ပါရမီရှင်တစ်ဦးကစားသမား၏ဧရာမဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူကပြောသည် kicker။ Auba crespo ရဲ့မဲခိုးကျွမ်းကျင်မှုကိုကြည့်သည်သူ၏ post ကိုလေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများအများစုသုံးစွဲသည်။
Auba အဆိုအရ "Crespo တစ်ဦးတရားမဝင်ကျားဖမ်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရှိသလောက်တည်ဆောက်ဖွင့်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရနှင့်ကာကွယ်ရေးလိုင်းများနောက်ကွယ်မှ run နေအတွက်အကျိုးစီးပွားကိုကြီးစွာသောသဘောတူညီမှုမပြကြဘူး။ သူကသေတ္တာအပြင်ဘက်တစ်ချိန်ကအလွန်အနည်းငယ်မျှသာလှုပ်ရှားမှုပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သေတ္တာအတွင်းသူရွှေ့ဖို့ဘယ်လိုသိကြ၏။ ဒုတိယဘောလုံးတက်အဆုံးသတ်သွားကြသည်ရှိရာသူကိုငါသိ၏။ သူ6ကိုက် box ထဲမှာကျန်ရစ်နေရာမဆိုအနည်းဆုံးငွေပမာဏကို exploit ကိုဘယ်လိုသိတယ်။ သူ့ကိုငါကဲ့သို့ဖွစျနေ့စဉ်သင်ယူနေပါတယ်။ "
Pierre-Emerick Aubameyang ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက် -LifeBogger အဆင့်
ကျနော်တို့ Pierre-Emmerick Aubameyang ဘို့ငါတို့လူကြိုက်များစာရင်းဇယားလိုက်နာပါတယ်။